Casharrada casharrada Android talaabo talaabo ah: uga faa'iideyso mobiladaada | Androidsis (Bogga 15)
SwiftyKey Beta hadda waxaa ku jira muuqaalka kabadhka
Kiiboodhka ugu caansan Google Play Store, Swiftkey, wuxuu hagaajiyay ikhtiyaarrada koobiga iyo dhajinta leh astaamaha iskuulada.
5 sababood oo ah sababta ADW Launcher uu u noqon karo barnaamij bilow ah oo aad jeceshahay
ADW Launcher ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 2.0 kadib 5 sano oo la sugayay inay dhacdo. Wuxuu ku sameeyay sida ugu macquulsan.
[ROOT] Sida loo rakibo Samsung Galaxy S7 Game Launcher-gaaga Samsung Galaxy S6
Maanta waxaan sharxayaa talaabo talaabo ah sida loo rakibo S7 Game Launcher ee Samsung Galaxy S6, S6 Edge iyo S6 Edge Plus.
Facebook Messenger waxaa lagu cusbooneysiiyay tab cusub oo loogu talagalay Guriga
Facebook Messenger waxaa lagu cusbooneysiiyay tab cusub oo guriga ka dhigaya mid fududeynaya bilaabida wada hadalka.
Google wuxuu cusbooneysiiyaa barta 'Now on Tap' oo leh ficillo deg deg ah iyo meelaha ku dhow
Kuwa aan dooneynin inay adeegsadaan amarrada codka, Hadda Taabo hadda waxaa ku jira laba baarar oo leh tujaabyo howlaha aasaasiga ah.
Sida loogu ciyaaro bakhtiyaanasiibka qaranka si nabadgelyo leh Android-kaaga. (Bonoloto, Primitiva, Euro Millions, La Quiniela,)
Maanta waxaan sharxayaa sida loogu ciyaaro Bakhtiyaanasiibka Qaranka iyo Bakhtiyaanasiibka Gobolka iyo sharadyada laga helo Android-keena iyo hab gebi ahaanba ammaan ah.
Shazam ee loogu talagalay Android hadda si toos ah ayuu u ogaan karaa waxa muusikada aad dhageysaneyso
Laga soo bilaabo ikhtiyaarka "AUTO" ee ku yaal Shazam ee loogu talagalay Android, kaliya adoo bilaabaya barnaamijka, waxaad ka ogaan kartaa heesta ciyaareysa adigoon riixin badhan kasta.
Sida looga dhigo Android-kaaga inuu u ekaado Apple iPhone 6
Casharro aan ku sharaxeyno sida loo helo muuqaalka iPhone 6 ee Android iyadoo la adeegsanayo kuwa ugu fiican ee laga heli karo dukaanka arjiga.
Hordhaca Android N Developer 4 hadda waa la heli karaa
Hordhaca Android N Developer 4 hadda waa la heli karaa, oo ay ku jiraan API-yada si loo cusbooneysiiyo dhammaan barnaamijyada oo markaa looga dhigo kuwa isticmaala.
Abuur dariiqyo si dhakhso leh oo fudud leh Abuur Qaadaha App
App: Shortcut Abuuraha waa barnaamij la yimaada aragti fudud laakiin sidoo kale leh shaqooyin horumarsan oo loogu talagalay habeynta
Telegram waxaa lagu cusbooneysiiyaa qoraalada daruuraha, fiidiyow cusub oo fiidiyoow ah iyo waxyaabo kaloo badan
Hadda waxaad ku heli kartaa qoraallada isku dhafan ee aalado kala duwan si aad dib ugu noqon karto farriintaas aan dhammaystirnayn ee ku taal Telegram.
Screenshot Crop iyo Share, codsi la mid ah Quick Memo oo ka socda LG oo ansax ku ah dhammaan Android
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo helo shaqooyinka 'LG Quick Memo' ee terminal kasta oo Android ah mahadnaqa barnaamij bilaash ah oo laga heli karo Play Store.
Sida loo badbaadiyo ama loo qurxiyo ogeysiisyada Android si aadan waligaa u ilaawin
Waxaan barnaa sida loo badbaadiyo ama dib loogu dhigo dhammaan ogeysiisyada ku yimaada taleefankaaga casriga ah ee Android si fudud oo bilaash ah.
Sida wax looga beddelo PDF qaab aad u fudud oo ku saabsan Android
Maanta waxaan ku sharaxeynaa laba dariiqo oo aad u fudud annaga oo adeegsanna laba App oo bilaash ah oo noo oggolaan doona inaan wax ka bedelno PDF-ka ka socda Android
Dango, oo ah barnaamij loogu talagalay in lagu qoro emoticons iyo GIFs fariimahaaga iyo barnaamijyada kumbuyuutarkaaga
Dango waa barnaamij kaamil ah "Kudar" kumbuyuutarkaaga iyo barnaamijyada farriimaha ee lagu daro GIF-yada firfircoon iyo emojis
[APK] Ka soo dejiso Adeegyada Google Play qalab kasta oo Android ah
Ma rabtaa inaad ku rakibto adeegyada Google qalabkaaga Android? raac casharkeena halka aan ku sharaxeyno sida loo cusbooneysiiyo Google Play Service
Google ayaa ugu dambayntii hagaajisay bugta Marshmallow ee "Memory leak"
Ugu dambeyntiina, mid ka mid ah cayayaanka ugu waaweyn ee ku jira Android 6.0 Marshmallow ayaa la saxay waxayna ku dhowdahay inay ku daydo tan Lollipop oo leh "Memory leak".
Sidee looga daawan karaa ciyaarta ka socota Spain tooska barnaamijkaaga Android iyo dhamaan Euro 2016
Maanta waxaan sharxayaa sida loo daawado ciyaarta ka socota Spain iyo dhammaan kulamada Euro 2016, Euro 2016 ee lagu ciyaarayo Faransiiska.
Huawei wuxuu ku dhawaaqay sharafta 5A oo leh shaashadda 5,5 ″ HD iyo batari 3.100 mAh ah
Huawei wuxuu ku darayaa terminal cusub buugiisa 'Honor 5A' oo leh shaashad 5,5 HD ah iyo laba kamaradood oo xiiso leh xagga hore iyo xagga dambe.
[APK] Chrooma KeyBoard, kiiboodh la mid ah midka rasmiga ah ee Android, ayaa loo cusbooneysiiyay 3.0
Kiiboodhka Chrooma waa kumbuyuutar leh doorbid aad u weyn oo midab ah iyo inuu noqdo chameleonic iyadoo ku xiran barnaamijka aad isticmaasho. La cusboonaysiiyay ilaa 3.0.
Kaamiro Furan, kamarad sawir ah oo loogu talagalay Android Open Source oo leh xulashooyin badan oo qaabeyn ah
Maanta waxaan kugula talineynaa Kaamirada Furan, mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay Android, gabi ahaanba waa bilaash iyo il furan.
Sida loo dhagaysto loona tirtiro waxkasta oo aad waligaa ku tidhi Google
Google waxay leedahay degel aad ka heli karto diiwaanka wax kasta oo aad tidhi adoo adeegsanaya amar cod ama raadinta Google.
Macaamiisha ugu fiican Telegram waxaa loogu yeeraa Plus Messenger waana BILAASH !!
Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa macmiilka ugu wanaagsan Telegram ee loogu talagalay Android, codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno adoo gujinaya qoraalkan.
Isku xirka Windows 10 ee Android mahadsanid barnaamijkan bilaashka ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan sharxayaa sida loogu raaxeysto Windows 10 interface-ka Android oo leh Launcher-ka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android qaabka.
Marshmallow wuxuu hadda ku jiraa 10% dhammaan qalabka Android
Google wuxuu la wadaagay tirooyinka qaybinta ugu dambeyntiina waxaa la ogaaday in Android 6.0 Marshmallow ay kujirto 10,1% ee aaladda Android.
Awoodda 'Power Toogles', codsiga ugu fiican ee lagu abuuri karo dariiqa toobiye ee daaha ogeysiiska ee 'Android'
Maanta waxaan ku tusinayaa sida loo abuuro bar-toobiye oo daaha ogeysiiska Android ah qaab aad iyo aad u fudud oo aan xidid lahayn.
Sida loo badbaadiyo batteriga ku jira Android M adoo ku qasbaya habka Doze. Badbaadi ilaa 40% batari !!
Maanta waxaan ku sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loogu keydiyo batteriga ku jira Android M adoo ku qasbaya habka 'Doze' si loo gaaro ilaa 40% keyd batari.
Ka dheji muusikada aad kahesho YouTube-ka shaashadda qufulka barnaamijka Stream
Stream waxaad ka dhagaysan kartaa muusikada aad jeceshahay shaashadda qufulka ama waxaad abuuri kartaa liisaska si aad ula wadaagto xiriirada.
Sida loogu biiro Bein Sports
Maanta waxaan sharxayaa dhammaan dariiqooyinka la heli karo ee lagu saxiixo ama loogu qoro Bein Sports oo aan sidaas ugu raaxeysto Liga BBVA, Copa del Rey, Champions League iyo tartamada kale ee heer qaran iyo heer caalami ah meel kasta oo aan joogno.
[APK] Google Clock wuxuu ku daraa mugga iyo xakamaynta gariirka, isbeddelka muuqaalka iyo waxyaabo kale oo badan
Google Clock ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 4.4 kaasoo soo bandhigaya faahfaahinta muuqaalka ah iyo labo bog oo cusub oo loogu talagalay mugga iyo xakameynta gariirka
Flamingo ee Twitter waa macmiil aad u fiican oo heshiis weyn ku leh muuqaalka
Flamingo waa macmiil cusub oo Twitter ah oo ku sharxaya muuqaalka muuqaalka weyn wuxuuna bixiyaa xulashooyin habeyn weyn.
Xiaomi Warcraft, oo ah mawduuc cusub oo gaar ah moobiilkaaga MIUI
Xiaomi waxay soo bandhigeysaa mowduuc gaar ah oo loogu talagalay in lagu shaqsiyeeyo dhammaan aaladahaaga oo ay soo bandhigtay filimka 'Warcraft: The Origin'
[APK] Trebuchet Launcher, soo dejiso oo ku rakib barnaamijka 'CM13 Launcher' Android kasta oo aan loo baahnayn xidid
Maanta waxaan ku siineynaa APK-ka Bixiyeha 'Trebuchet Launcher', 'CM13 Launcher' ee wixii Android ah waxaanan ku tuseynaa wax kasta oo ay na siiso.
Facebook ayaa ka noqday Ogeysiis kuna rid in uu ku dhex dari doono Messenger
Facebook ayaa sii wada inay isku darsato adeegyo aad iyo aad u tiro badan oo ku saabsan mid ka mid ah barnaamijyadeeda loogu jecelyahay sida Messenger taasna waxay horseedi doontaa Ogeysiin.
Mid ka mid ah kamaradaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android waxaa loo yaqaan 'Camera MX' waana bilaash
Camera MX shaki la'aan waa mid kamaradaha ugu wanaagsan ee Android, astaamaha leh sida saameynta tooska ah, Live Shot iyo wixii ka sareeya oo bilaash ah.
Sida loo helo xakameyn buuxda oo ku saabsan barnaamijka Android barnaamijka
Maanta waxaan kugula talineynaa barnaamij naga siinaya guud ahaan xakamaynta mugga ku jira Android si loogu maareeyo arjiga iyadoo loo adeegsanayo qaab otomaatig ah.
Facebook Messenger wuxuu helayaa tiro emojis cusub oo leh kala duwanaansho jinsi iyo jinsi
Dhamaan emojisyadaas uu Facebook Messenger ku daro ayaa ah kala duwanaansho xagga jinsiga iyo jinsiga ah. Guud ahaan waxaa jira in ka badan 1.500 oo emoticons
Xiriirinta tooska ah ee lagu martiqaado koox hadda waxay ka shaqeeyaan beta beta
Waxa kaliya ee ku dhaca xiriiriyeyaasha tooska ah ee martiqaadka kooxda ee WhatsApp ayaa ah inaysan weli abuuri karin adeegsadaha.
Ku hayso barnaamijyo iyo aaladdag badan shaashaddaada Galaxy-ga ah adoo adeegsanaya sirtan Samsung ee sirta ah
Samsung Galaxy-ka cusub waxaa ku jira shaashad shaashad shaashad qarsoodi ah oo kuu oggolaaneysa inaad waxyaabo badan ka hesho shaashadda.
Sida loo qaado Sawirro Sawirro toos ah sawiro ku saabsan Android
Maanta waxaan kugula talineynaa codsi aad ku qaadatid sawirro sida kuwa Apple iPhone-ka ah oo ku jira qaabka Sawirada Tooska ah ee Android.
5 barnaamij oo loogu talagalay socodsiinta iyo bamgareynta codkaaga jirka
5 barnaamij oo u taagan sida ay u dhameystiran yihiin iyo inay ku kala soocaan qaar ka mid ah wanaagyada cajiibka ah si ay uga faa iideystaan ​​sida ugu fiican ee muuqaalkeena jireed
N-ify waa la cusbooneysiiyay si uu u keeno waxyaabo badan oo Android N ah Lollipop iyo boosteejooyinka Marshmallow
N-ify waxaad kuheli kartaa qaar ka mid ah wanaagyada Android N mobilkaaga oo leh Android Lollipop ama Android Marshmallow. Module Xposed ah oo u baahan xidid.
Waxaad ku ogaan doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Euro 2016 iyadoo la adeegsanayo codsiga rasmiga ah ee loogu talagalay Android
Haddii aad rabto inaad la socoto wax walba oo ka dhaca Euro 2016 ee Faransiiska, waa inaadan ka maqnaan arjiga rasmiga ah ee aan maanta kuugu soo bandhigeyno Androidsis.
Maanta waxaan soo bandhigeynaa CastBox, oo ah barnaamij loogu talagalay isticmaaleyaasha Google Chromecast oo xitaa kugu xiraya maktabaddaada Facebook.
Hexlock, oo ah barnaamij lagu ilaaliyo barnaamijyada Android ee la jaan qaada dareeraha faraha iyo astaamaha
Maanta waxaan kugula talineynaa barnaamijka loo yaqaan 'Hexlock' kaas oo naga caawin doona inaan ka ilaalino barnaamijyada Android ka soo horjeedka marin la'aanta
4 sababood oo kaa dhaadhicinaya inaad isticmaasho Google Spaces
Goobaha Google waa barnaamij lagu ururiyo koox saaxiibo ah oo ku xeeran hiwaayad sidaasna ay ku wadaagaan dhammaan noocyada maaddooyinka.
Slash, kumbuyuutar cusub oo isku daraya raadinta Google sida Allo iyo Gboard
Slash waa kumbuyuutar gebi ahaanba bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad sameyso dhammaan noocyada ficilada sida raadinta, wadaagista sawirrada, iyo inbadan.
Google wuxuu u keenayaa taageerada rasmiga ah ee Android Raspberry Pi 3
Waxaa la yaab leh in Google ay ku dartay taageero rasmi ah Raspberry Pi 3 oo ka socota keydka Android AOSP. Dhamaan wararka.
Maxaad u isticmaali laheyd Smart Lock halkii aad had iyo jeer ka furi laheyd shaashadda qufulka
Haddii aad isku darto dareeraha faraha iyo Smart Lock, waxaad yeelan doontaa nabadgelyo ka weyn iyo khibrad isticmaale oo soo hagaagaya.
[APK] Soo degso oo rakib Apollo iyo Maareeyaha DSP, Cyanogenmod oo ah muusigga muusigga iyo barbareeyay
Maanta waxaan idinla wadaageynaa dhammaan codsiyada maamulaha Apollo iyo DSP, ama wixii isku mid ah, muusigga muusikada iyo barbaraha Cyanogennmod.
[APK] Sida loogu daawan karo finalka Champions League 2016 bilaash. Real Madrid - Atlético de Madrid
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo daawado finalka Champions League 2016 bilaash, finalka Real Madrid VS Atlético de Madrid ay wajihi doonaan.
Sii noloshaada maroojin leh caado wanaagsan oo caafimaad leh mahadsanid Fabulous
Fabulous waa barnaamij kuu noqon doona tababarahaaga shaqsiyeed si uu kaaga caawiyo inaad horumariso afar meelood oo muhiim u ah noloshaada.
YouTube wuxuu isku daraa liiska xulashooyinka cusub ee barnaamijka Android
YouTube wuxuu hagaajiyay liiska xulashooyinka fiidiyowga fiidiyowga iyadoo la dhigayo salka shaashadda. Cusboonaysiin yar.
ES File Explorer ayaa ugu dambayntii meesha ka saaraya xayeysiiska batteriga ku dhaca
Ugu dambeyntiina, kooxda horumarinta ee ES File Explorer ayaa ka saartey badhanka "Charging Boost" oo ay ku dartay cusboonaysiintii ugu dambeysay.
Sida loo dejiyo shaashadda qufulka faraha
Waxaan ku baraynaa sida saxda ah ee aad ugu xirto qufulka shaashadda faraha aalad leh qalabkan
Barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho mugga iyo dhalaalka YouTube-ka oo leh xoqooyin
Barnaamijkan oo loo yaqaan 'Touch Controls' ee YouTube-ka waxaad ku badali kartaa mugga iyo dhalaalka adoo tilmaamaya dhib la'aan.
Google wuu shaqeeyaa markaa uma baahnid inaad adeegsato furaha sirta ah ee Android
In Android, dhamaadka sanadka, Google wuxuu dhexgalin doonaa sheeko cusub si dadka isticmaala aysan ugu baahnayn inay isticmaalaan furayaasha sirta ama furayaasha si ay u soo galaan
Sida loo helo mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan Samsung Galaxy ee ku jira Android kasta
Samsung Galaxy-ka cusubi wuxuu leeyahay muuqaal qaadanaya shaashadaha shaashadda bogga ama barnaamijka.
Fiidiyow ayaa muujinaya tayada animations-ka Android N
Haddii aad rabto inaad ku qanciso mid kasta oo ka mid ah faahfaahinta animations-ka loo adeegsaday Android N iyo Marshmallow, fiidiyowgaan ayaa ku tusi doona.
Science Journal waa barnaamij Google ah oo lagu fuliyo tijaabooyinka moobilkaaga
Science Journal waa barnaamij cusub oo Google ah oo kugu dhiirrigelinaya inaad tijaabooyin gaar ah ku qaaddo dareemayaasha mobilkaaga.
Sidee Google u maamuli doontaa Apple muddo sanado ah
HAL 9000 iyo Stanley Kubrick waxay muujinayaan halka aan u jihaysano xiriirka mashiinka-nin iyo halka Google ay faa'iido weyn kaga jirto Apple.
Maxaa ku cusub MIUI 8?
Xiomi wuxuu ku soo laabtay ugaarsiga # 01 ee iibka adduunka. Sidaan horey kuugu sheegnay Google, dhawaanahan «Apple China» ...
Ka hel qof kasta oo cusub Google Duo iyo Google Allo Apps
Maanta waxaan ku tusayaa talaabooyinka fudud ee la raaco si aad iskaga diiwaangeliso barnaamijka Google si aad isugu daydo Google Duo iyo Google Allo ka hor qof kale.
4 astaamo cusub oo Android N ah oo ku dhacay calaamadda
Vulkan API ee loogu talagalay sawirada, dejimaha kuxiran ama xaqiiqda dhabta ah ee Daydream ayaa ah qaar ka mid ah tayada Android N ee bixiya qoraalka.
Noisli, barnaamijka soo saara dhawaaqyada nasashada nasashada, wuxuu yimaadaa Android
Noisli ayaa ugu dambayntii timid Android ka dib markii laga helay webka, iOS, iyo Chrome. Abka ku habboon si aad ugu nasato moobilkaaga.
[APK] Hadda soo deg Keyboardka cusub ee Google ee loogu talagalay Android N
Maanta waxaan kuu keenaynaa apk si toos ah loogu soo dejisto loona rakibo gacanta kumbuyuutarka cusub ee Android N Google oo leh warar badan oo xiiso leh.
Android Wear 2.0 ayaa lagu dhawaaqay waxyaabo badan oo cusub
Android Wear 2.0 ayaa timid si ay u qeexdo khibrada isticmaalka aalado la gashado nooc kasta oo ka mid ah kuwa suuqa ka bilaabay.
Ku xalli dhibaatooyinkaaga caymiska guriga ama xafiiska
Miyaad leedahay caymis aad u yar oo ka baxsan gurigaaga oo markaad gudaha gasho waxaad lumineysaa khadka ugu dambeeya? Soo ogow sida loo xaliyo dhibaatada oo aad ugu hesho caymis guriga.
Muuqaalka labaad ee Android N waxaa hadda loo yaqaan nooca alfa
Nooca labaad ee hore ee loogu talagalay horumariyeyaasha 'Android N' wuxuu noqonayaa nooca alfa, kaas oo xaqiijin kara imaatinka nooca saddexaad ee qaabka beta.
SwiftKey wuxuu bilaabay Swiftmoji, kiiboodhka xooga saara emojis
Swiftmoji waa kiiboodh u leh doorbid gaar ah emojis adoo dhigaya bar ka sareysa talooyinka qoraalka.
Hubi in mobilkaagu taageersanyahay Doze, aaladda ugu fiican ee badbaadinta batteriga
Doze waa waxqabadka Android Marshmallow ee kordhiya nolosha batteriga ee moobiilka. Waxaan ku tusineynaa sida loo ogaado in moobilkaaga uu la jaan qaadi karo
4 barnaamij si loo ogaado saadaasha hawada sare
4 barnaamijyada saadaalinta hyperlocal ee kuu ogolaanaya inaad ogaato ilaa daqiiqada waxa cimiladu noqon doonto si loo sii odoroso xaaladaha cimilada.
[ROOT] Sida otomaatiga loogu rogo wareejinta shaashadda Android-keena
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo otomaatig u noqdo wareejinta shaashaddaada Android iyada oo ay ugu mahadcelinayaan codsi gebi ahaanba bilaash ah.
[APK] Tani waa sida Tap Si aad u Turjun u shaqeyso, shaqeynta cusub ee Google Translate
Maanta waxaan rabaa inaan ku tuso sida ay u shaqeyso Taabashada Turjumaadda, shaqeynta cusub ee Google Translate ee noo oggolaaneysa inaan ka adeegsanno barnaamijka barnaamij kasta.
[APK] Soo dejiso Gallery Plus hadda, sawirka adduunka ugu ammaansan adduunka ee loogu talagalay Android
Maanta waxaan kuu daynaynaa barnaamijka 'Gallery Plus apk', ama wixii lamid ah, sawir gacmeed xasaasi ah oo loogu talagalay Android oo leh xulashooyin amni oo cajiib ah.
MiXplorer waa sahmiye fayl bilaash ah oo leh qaabab badan oo kala duwan
MiXplorer waa baare fayl oo ay abuureen horumariye madax-bannaan oo cusbooneysiinayey dalabka tan iyo 2012.
Android N marki hore ma lahan doono taageero tikniyoolajiyadda 3D Touch
Sida laga soo xigtay dhowr bog, Android N ma lahaan doonto taageero 3D tiknoolajiyad taabasho ahaan, waa inaan sugnaa wixii cusbooneysiin ah.
Roger wuxuu taleefankaaga gacanta si bilaash ah ugu dhejiyaa kaaliyaha codka ee 'Alexa'
Haddii aad rabto inaad la xiriirto kaaliyaha codka ee 'Alexa' ee 'Alexa', oo ku duuban Echo, oo leh barnaamijka Roger waxaad ka heli kartaa amarradiisa codka.
Bog furaha shabakada ee ugufiican ee xayeysiinta otomaatigga ah iyo waxbadan
Maanta waxaan rabaa inaan kuusoo bandhigo waxa kuwa badan ay yihiin biraawsarka ugu fiican ee webka leh xayeysiinta otomaatiga ah iyo fursado badan oo xiiso leh.
Dark Sky ayaa ugu dambayntii timaadda Android si ay u bixiso warbixinno illaa daqiiqad daqiiqad ah
Dark Sky waa barnaamij ka yimaada macruufka ka dib markii aad heshay guul weyn oo kuu fidinaysa illaa daqiiqad daqiiqado xaaladaha cimilada iyo khariidado tayo sare leh.
Taabashada Caawinta, kudar badhanka sabeynta dalwaddi ee Android-kaaga
Maanta waxaan soo bandhigeynaa codsi bilaash ah kaas oo awood u siin doona howlaha taabashada Assistive Touch ee moodooyinka kale ee Android ee ku yaal terminal kasta oo Android ah.
Soo dejiso oo rakib arjiga cusub ee WhatsApp ee Windows iyo MAC. Runtii ma u qalantaa?
Maanta, marka laga reebo inaan ku baro sida loo rakibo barnaamijka WhatsApp ee Windows iyo MAC, sidoo kale waxaan ku siinayaa ra'yigayga ku saabsan waxa aniga ahaan ii ah codsi aan waxtar lahayn.
Codsi lagu akhriyo Wargeysyada Isbaanishka oo bilaash ah
Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa codsi wanaagsan oo loogu talagalay Android kaas oo noo oggolaan doona inaan si bilaash ah u akhriyo dhammaan Wargeysyada Isbaanishka ah.
Bixiyaha usbuuca ee Google Play, saacadkeyga digniinta, saacad habeen u sameysantaada Android oo keliya 0,10 Euros
Maanta waxaan kuu keenaynaa barnaamijka Google Play ee usbuuca kaas oo aad ugu rogi karto Android-kaaga saacad habeennimo oo xarrago leh oo shaqeynaya.
Sida loo Hagaajiyo Samsung Galaxy S6 Edge Plus Dhibaatada Hurdada ee Dheer
Sidaan kuugu balan qaaday shalay markii aan daabacay boostada iyo fiidiyowga casharrada oo aan ku baray talaabo talaabo ...
Maanta waxaan ku tusayaa adiga talaabo talaabo ah iyo caawimaad fiidiyoow ah, habka lagu rakibo TWRP iyo helitaanka xididka Samsung Galaxy S6 Edge Plus.
Tilmaamaha Android: maanta sida looga soo dejisto khariidad kasta Khariidadaha Google
Maanta waxaan ku barnaa khiyaano fudud oo Android ah oo aan kala soo degsan karno khariidad kasta Khariidadaha Google si loogu isticmaalo khadka iyada oo aan loo baahnayn internetka.
Xiaomi wuxuu ku dhawaaqay Mi Max oo leh 6,4 ″ shaashad, 4GB oo RAM ah iyo batari 4.850mAh ah
Xiaomi waxay soo saareysaa Mi Max cusub oo leh shaashad 6,4 ah, dhowr nooc oo ku saabsan qarka / RAM / iyo xusuusta gudaha iyo batari 4.850 mAh ah.
4 ka mid ah toobiyeyaasha ugu fiican ee aad ku haysato Android ee laga yaabo inaadan aqoon
4 marin-u-hello muhiim ah oo laga yaabo inaadan ogeyn inay wax soo saar badan la leedahay taleefannada casriga ah ee Android. Hawlaha sida Smart Lock ama Google Now Launcher ...
Sida loo diro farriimaha si toos ah looga tirtiro WhatsApp
Barnaamijkan oo loo yaqaan 'Kaboom' waxaad ugu diri kartaa farriimo is-qudh-gooya WhatsApp-ka si fudud oo fudud. Farriimahaasi waxay noqon karaan sawirro.
Sidee looga soo kabanayaa ogeysiisyo aad ku lumisay shil
Waxaan kuu tuseynaa qaab fudud sida loo soo ceshano ogeysiisyada kaa lumay shil ama sabab u tahay dib u bilaabid nidaamka oo aan munaasib aheyn.
Sida loo dhiirado, loo italisiyo ama hoosta looga xariiqo qoraalka ku jira Gmail-ka Android
Laga soo bilaabo barnaamijka 'Gmail' ee ku yaal Android waxaad ka codsan kartaa xulashooyinka qoraalka aasaasiga ah sida geesinimada ama hoosta ka xarriiq si aad u abuurto emayllo dhammaystiran.
Dhammaan isgaarsiinta kooxdaada shaqada hal meel kula dhig Slack weyn
Slack ayaa si fudud u ah adeegga ugu fiican ee looga faa'iideysan karo koox shaqo oo leh xaalado taxane ah oo aan cid kale haysan.
Zapya, hab kale oo kala duwan oo loola wadaago faylasha u dhexeeya aaladaha Android
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo qaab ka duwan oo aan ku wadaagi karo feylasha inta udhaxeysa aaladaha Android adigoon isticmaalin fiilooyin ama qarash gareyn.
Jeebku wuxuu noqdaa shabakad bulsheed leh waxyaalo jecel iyo dib-u-dhajin
Jeebku wuxuu u sii jeesanayaa shabakad bulsheed marka loo eego asalkeeda markii ay fiicneyd oo keliya keydinta boggaga internetka ee akhriska dambe.
Mudane Telefoon isbarbardhiga taleefanka casriga ah ee laga heli karo codsi bilaash ah oo loogu talagalay Android
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo barnaamij u adeegi doona isbarbardhigga taleefannada casriga ah ama aaladaha moobaylka dhammaan noocyada iyo moodooyinka
Flyperlink, oo ah biraawsar Websaydh weyn oo leh daaqadaha qaabka loo yaqaan 'Chat Heads-windows' oo lagu rakibo xagga dambe
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo oo aan kugula taliyo Flyperlink, oo ah bog internet xamaasad leh oo la mid ah Facebook Chat Heads iyo boggaga xamuulka ee gadaasha
Sida loo tirtiro talo soo jeedinta erayga Google Keyboard
Laga soo bilaabo nooca 5.0 ee Keyboard Google, waad tirtiri kartaa soo jeedinta ereyga adoo adeegsanaya xeelad fudud taasna waxay ka kooban tahay tilmaam fudud.
BLW Music Visualizer Wallpaper, Muqaallada Muusikada ee taga laxanka miyuusigga aad dhageysaneysid
Maanta waxaan soo bandhigeynaa barnaamij na siinaya seddex sawir oo muusig ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Android. Warqadaha sawirqaade ee dhaqdhaqaaqa ah ee u socda laxanka muusikadaada.
7 barnaamij oo qasab ah inay lahaadaan ayna ku baxaan wax ka yar 1 euro
Kuwani 7 barnaamijyadu waa caawimaad weyn, waxay leeyihiin tayo aad u badan dhammaantoodna waxay ku kacayaan wax ka yar 1 euro. Waxay yihiin si fudud waa in ay leeyihiin on your phone Android.
Rock Clock, saacadda alaarmiga ee ragga adag
Rock Clock waa saacad qaylo-dhaan ah oo loogu talagalay qalabkaaga mobilada oo aan lahayn badhan uu ku demiyo alaarmiga markii uu dhacayo si aad u soo kacdo
[APK] Hadda soo degsada arjiga cusub ee cusub ee Ebay ee loogu talagalay Android
Hoos waxaan ku siineynaa xiriir toos ah si aad uga soo dejiso ka hor qof kasta oo kale barnaamijka cusub ee cusbooneysiiyay ee Ebay ee loogu talagalay Android.
Baro sida loo joojiyo dib u soo celinta tooska ah ee fiidiyowyada YouTube-ka hadda markay u timid si ku-meel-gaadh ah
Maanta laga bilaabo Google waxay hawlgalisay si toos ah muuqaallada fiidiyowyada YouTube-ka. Baro sida loo joojiyo hagahan.
Fingo, oo ah dhammaystirka ugu fiican ee Launcher-kaaga Android
Maanta waxaan dooneynaa inaan kuu soo bandhigno Fingo, ama waxa isku si u yimaadda, dhammaystirka dhammaystirka u ah Launcher-kaaga Android, wax kasta oo aad isticmaaleyso.
Nova Launcher 4.3 wuxuu ka soo baxaa beta-ka habka habeenkii, faylalka Android N-ka ah iyo inbadan
Waxyaabaha cusub ee nooca 4.3 ee Nova Launcher la yimid, qaabka 'Android N' ee fayllada iyo habka habeenku wuu muuqdaa.
[APK] Soo dejiso oo rakib kamaradda cusub ee HTC 10
Maanta waxaan idinla wadaageynaa apk-ka kamaradda cusub ee HTC 10 waxaanan kuu sheegeynaa habka rakibida fudud ee kujira terminaal kasta oo Android ah.
Marshmallow wuxuu sii wadaa inuu Kordhiyo Boqolleydiisa tirooyinka qeybinta Android
Waxaan horeyba uheynay tirooyinka cusub ee loo qeybiyo Android bisha Maajo halkaasoo Marshmallow uu kusii kordhayo inkasta oo uusan laba jibaarneyn boqolkiiba bishii hore
[APK] Sida loo xaliyo dhibaatada isku xirnaanta xiriirka ee Android
Maanta waxaan sharraxaad ka bixineynaa xalka dhibaatada isku xirnaanta xiriirka ee ay la soo derseen qaar ka mid ah teendhooyinka Android, gaar ahaan boosteejooyinka asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha.
[APK] Abuur GIF-yadaada gaarka ah oo leh Gfycat on Android
Gfycat hubaal waa barnaamijka ugu fiican ee xilligan ku wareegsan GIF-yada la kiciyo, nooca feylasha noo oggolaanaya inaan waqti weyn qaadanno.
4 siyaabood oo loo aqriyo farriimaha adigoon jeegareyn buluugga ah ee WhatsApp
Waxaan haynaa dhowr waddo oo sharci ah oo aan ku aqrin karno farriimaha annaga oo aan iska hubin WhatsApp-ka isla markaana aanan u oggolaanayn xiriirku inuu ogaado inaan akhrinnay.
Todogadget, barnaamijka iibka iyo iibka ee u dhexeeya shakhsiyaadka iyo shirkadaha
Maanta waxaan dooneynaa inaan soo bandhigno Todogadget, oo ah barnaamijka iibka iyo iibka cusub ee aysan aheyn inuu ka maqnaado Android-kaaga oo bedel weyn u noqon kara Wallapop.
Sababaha Fenix ​​uu u yahay macmiilka ugu wanaagsan Twitter-ka xilligan
Ka dib markii uu ku soo noqday nolosha sida Phoenix, macmiilkan Twitter-ka, oo si kadis ah loogu yeero Fenix, wuxuu sii wadaa inuu bixiyo khibrada isticmaale ee ugu fiican.
3 Ciyaartoyda muusikada ee Chromecast oo aadan tabi karin
Maanta waxaan soo bandhigayaa oo aan kugula talinayaa 3 Muusig oo Muusig ah oo loogu talagalay Chromecast oo leh taageero ku saabsan soo-saarista dhabta ah ee muusikada ee qulqulka iyada oo aan loo dhigin daruurta.
Apple Music waxaa lagu cusbooneysiiyay Android iyadoo leh fiidiyowyo muusig ah
Apple Music ayaa mar kale lagu cusbooneysiiyay Android si ay u keento sheeko cusub waana tan taageerada fiidiyowyada muusikada
Wicitaanada fiidiyowgu waxay ku dhacaan kanaalka BBM beta ee ku saabsan Android
Waqtigan la joogo wicitaanadan fiidiyowga ah ee BBM waxay ku sii jiraan kanaalka beta si loo xalliyo cayayaanka kala duwan ee muuqda.
Fursadaha gaarka ah ee aad wax ka beddeli karto nidaamka Android ee qarsoodiga ah UI Configurator
Android waxay leedahay menu qarsoodi ah oo leh ikhtiyaarro gaar ah oo lagu beddelo dabeecadaha qaarkood ee guddiga xakamaynta UI Configurator.
Maanta waxaan u soo bandhigeynaa Swipe Facebook ama wixii isku mid ah, macmiilka ugu fiican Facebook ee Android iyada oo aan la cunin ilo ama batari.
Maanta waxaan ku tusineynaa labada dariiqo ee aan ku cusboonaysiin karno Huawei P8 Lite si rasmi ah Android M tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah oo dhameystiran ah.
Finch waa beddel aad u fiican oo ah macmiil Twitter ah oo lagu beddelo Fenix
Finch wuxuu u yimid inuu beddelo Fenix, oo shalay hawlgab noqday markii uu gaadhay xadka astaamaha lagu soo rogo Twitter-ka, oo leh xulashooyin taxane aad u wanaagsan oo ah kuwa ugu fiican
App kale oo bilaash ah si aad awood ugu siiso Had iyo jeer On Samsung Galaxy S7 / LG G5 ee ku saabsan Android-kaaga
Maanta waxaan ku tusineynaa waxa ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee lagu ekeysiin karo Had iyo jeer On Samsung Galaxy S7 ama LG G5 wixii Android ah iyo bilaash ah.
Sida loo isticmaalo USB OTG ee loogu talagalay maaraynta faylalka ku jira Android-keena
Maanta waxaan kuu sharraxeynaa sida loo isticmaalo USB OTG si loogu maareeyo feylasha ku jira Android, dhammaantood fiidiyow sharraxaad fudud ah si wax walba ay kuugu caddaadaan.
[APK] Gmail for Android waxay ku dareysaa taageerada xisaabaadka Microsoft Exchange
Maaddaama nooca 6.4 Gmail uu ku darayo taageerada xisaabaadka emaylka Microsoft Exchange ee aaladaha aan Nexus ahayn si loo siiyo barnaamijkan kala duwanaansho ballaaran
10 sababood oo awood leh oo aad ugu xididdo taleefankaaga
Haysashada mudnaanta xididka taleefankaaga casriga ah macnaheedu waa inaad ka heli karto taxaddarro wanaag ah oo aan ku soo koobnay 10 sababood oo xoog badan.
Casharrada Aasaasiga ah ee Android: Maanta, Dhamaan Dejinta Google Chrome
Maanta waxaan ku tusineynaa wax walba oo ku saabsan qaabeynta suurtagalka ah ee Google Chrome si aad u ogaato sida loo qaabeeyo oo loo helo halka mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka ay ku yaalliin.
Sida looga abuuro meeraha yar yar Sawiradaada sawirada leh kamarada Google
Waxaan ku tusineynaa sida loo abuuro "meera yar" sawir sawir qaade ah oo lagu sameeyo barnaamijka Kaamirada Google oo bilaash lagu heli karo.
n7Player, muusig bilaash ah oo muusig ah xitaa leh taageerada qulqulka illaa Chromecast
n7Player, muusigga muusikada xasaasiga ah ee loogu talagalay Android oo leh interface isticmaale wanaagsan iyo astaamo xasaasi ah oo lagu daray nooca bilaashka ah.
Sida loogu duubo shaashadda taleefankaaga casriga ah AZ Screen Recorder
Sida loogu duubo shaashadda taleefankaaga casriga ah barnaamijka AZ Screen Recorder oo leh faa iidooyin dhowr ah: bilaash, bilaa xidid la’aan iyo sumad la’aan.
Radio.es, waa habka cusub ee lagu dhageysto raadiyaha ku jira Android-kaaga
Mid ka mid ah codsiyada ugu fiican xilligan si aad uga dhageysato raadiyaha ku jira Android-kaaga adoo adeegsanaya xiriirka Wifi ama xogta.
Shanta loo magacaabay barnaamijka ugufiican Google Play Awards 2016
Abaalmarinta Google Play ayaa markii ugu horaysay sanadkan lagu qaban doonaa Google I / O 2015 waana kuwan shanta barnaamij ee loo magacaabay inay noqdaan kuwa ugu fiican.
Glovo, waa barnaamij cusub oo daqiiqado ku soo gaarsiiya alaabada ugu wanaagsan magaaladaada
Glovo waa adeeg iyo barnaamij cusub oo guriga kuugu keenaya keenista alaab kasta oo aad ugu jeceshahay magaaladaada oo laga helo gacanta Glover
Turjubaanka Microsoft wuxuu horeyba ugu turjumayaa qoraalka sawirro
Turjubaanka Microsoft waxaa lagu cusbooneysiiyey tarjumaadda qoraalka sawirro iyo warar kale oo aan ku sii wadayno faahfaahinta oo aad u xiiso badan.
Casharrada Aasaasiga ah ee Android: Maanta, Dhamaan Waxyaabaha Ku Saabsan Nidaamyada Keyboard ee Android
Maanta waxaan ku baraynaa wax walba oo ku saabsan qaabeynta kumbuyuutarka Android ee ku jira barnaamijkan cusub ee aasaasiga ah ee 'Android-video-Tutorial' ah oo aadan tabi karin
Giphy wuxuu ugu dambeyntii bilaabayaa barnaamijkiisa Android
Giphy ayaa ugu dambeyn sii deysay barnaamijkeeda ku saabsan Android ka dib markii uu in muddo ah ku jiray iOS. App si loo helo GIF-yada ugu fiican xilligan
NoLED, ogeysiisyada qaab-dhismeedka LED-ka ee loo yaqaan 'terminals' oo aan lahayn LEDs ogeysiis ah
Maanta waxaan ku baraynaa inaad u ekeysiiso ogeysiisyada qaabka-LED-ka xitaa boosteejada iyadoon ogeysiisyada LED-yada. Wax walba si aysan u seegin ogeysiis kasta.
Ku rakib kamaradda Android N taleefankaaga casriga ah
Kaamiradda Android N ayaa la heli karaa ilaa shalay oo hadda waad ku rakibi kartaa smartpone-kaaga si wararka qaarkood loo sii daayo.